अप्रील 1, 2019 अप्रील 1, 2019 साइन्स इन्फोटेक	2 Comments डा. राम बहादुर बोहरा, धेरै बाँच्न
धेरै बाँच्न चाहना भएमा यसो गर्नुहोस् ! मानव जीवनमा सबैभन्दा महत्वपुर्ण धन भनेको स्वास्थ्य हो । हामीले हाम्रो दैनिक जीवनमा गर्ने कामहरुले पनि हाम्रो स्वस्थ जीवनशैलीमा धेरैं प्रभाव पार्ने गर्दछ । हामीले हरेक दिन गर्ने आचरणहरुमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने हो भने हामीले हाम्रो जीवनमा धेरैं कुराहरु परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।
लामो उमेरसम्म बाँच्न इच्छा हुनेहरूका लागि प्रकृतिले हामीलाई थुप्रै यस्ता बस्तु दिएको छ जसलाई सहि तरिकाले प्रयोग गर्न सकिन्छ भने मानिसको आयु बढाउन सकिन्छ यसमा दुईमत छैन । आज यो लेखमा के कस्तो खानाले मानिसको आयु बढाउन सकिन्छ भन्नेबारे जानकारी पस्कन लागेको छु ।
हाम्रो शरीरलाई सवैभन्दा बढी पानीको आवश्यकता हुन्छ । दैनिक पानीको मात्रा कमसेकम ७-८ गिलास पानी पिउने बानी बसाल्नु पर्दछ । पानीले किड्नीलाई स्वास्थ्य बनाउछ भने मृगौलालाई समेत फाइदा गर्दछ ।
बिहान उठ्ने बित्तिकै एक गिलास मनतातो पानीमा कागतीको रस राखेर पिउने
मौसम अनुसारका फलफूल खाने
चिसो पेय पदार्थ नपिउने
चिया, कफी धेरै नपिउने
रेसायुक्त तरकारी बढी खाने
तारेको र डढेको नखाने तरकारीको बोक्रा नफाल्ने
चाँडै सुत्ने र चाँडै उठ्ने ८ घण्टा मस्त सुत्ने
बिहान कम्तिमा ३० मिनेट हिड्ने, व्यायाम गर्ने
तनावमा काम नगर्ने
सुख, दुःख सेयर गर्ने बिदाको दिन परिवारसहित घुमफिर गर्ने
पुजापाठ गर्ने जंकफुड, फास्टफुड सेवन नगर्ने
हप्तामा एक पटक ब्लडप्रेसर जाँच्ने
शाकाहारी खानामा बढी ध्यान दिने बानी बसाल्न सके कुनैपनि रोगले आक्रमण नगर्ने कुरा प्राकृतिक चिकित्सामा वर्णन गरेको छ ।
← वैज्ञानिक कारण : उपवास एवं ब्रत किन बस्ने ?
वैज्ञानिक कारण : घरको अगाडि मठमा तुलसी किन रोपिन्छ ? →
2 thoughts on “धेरै बाँच्न चाहना भएमा यसो गर्नुहोस्”